Tog fatahay oo dad ku laayey, kuwana ku dhaawacay Waqooyiga gobolka Mudug. – Radio Daljir
Maajo 6, 2011 12:00 b 0
Xarfo, May 06 – Ugu yaraan labo qof ayaa ku dhimatay mid kalena waa loo-meel la’yahay kaddib markii daadad xooggani ay ka soo rogmadeen roobab mihigaan ah oo dhawrkii habeen ee ugu danbeeyey ka da’ayey dhulka hawdka ee ku-yaalla cirifka waqooyi ee gobolka Mudug.
Roobabkaan oo mawjado biyo ah ku soo celiyey togga lagu magacaabo Dhoosaalli ayaa cagta mariyey dad iyo duunyo badan kaddib markii xoogga biyahaasi ay ku soo urureen lugta weyn ee taggaasi taasi oo ku soo faafta dooxooyinka gobolka Mudug.
Dadka dhintay, kuwa lala’yahay iyo kuwa kale oo la sheegay daadadkaasi in ay wax-yeeleen ayaa dhammaantood ku sugnaa deegaanno miyi ah oo ka tirsan tuulada Beer oo ah tuulo hoos-timaadda degmada Xarfo ee gobolka Mudug, waxaana toggaasi uu taxaabtay xilli ay ku talo-galeen in ay ka tallaabaan biyaha oo si xawli ah u
Guddoomiyaha degmada Xarfo C/llaahi Faarax Bayle ‘Takarooni’ oo maamulkiisu ay gurmad ahaan ku tageen meelihii wax ka dhaceen ayaa noo xaqiijiyey dhimashada laba ruux oo biyahaasi ay dileen, hal qof oo lala’yahay iyo sidoo kale saddex qof oo kale oo wax ku noqotay daadadkaasi kaddib markii biyuhu la tageen si dirqi ahna ay kaga bad-baadeen.
Guddoomiyuhu waxaa uu sheegay wali in ay baad-goobayaan halka qof ee lala’yahay haseyeeshee waaxaa uu tilmaamay in ay rumaysan yihiin qofkaasi in uu dhintay ayna arkeen caddaymo ku filan oo ay ka mid yihiin qaar ka mid ah dharkii uu xirnaa.
Togga Dhoosaalli ee biyaha uu keenay ay sababeen dhimashada iyo dhaawaca ayaa ah tog baaxad-weyn kana soo unkaba dhul-biyood hawdka ah ee aggagaarka Saax-dheer , una soo dhaadhaca dhulka dooxada ah ee gobolka Mudug halkaasi oo ugu danbaynta biyihiisu ay ku faafaahan.
Kontomeeyo qof oo Somali ah oo ku le?eday doon ay saaraayeen oo ku degtay xeebaha Liibiya.